प्रकाण्डका छाेराले अाेलीलार्इ दिए यस्ताे ठाडो चुनौती, ओली समस्यामा ! – Setosurya
प्रकाण्डका छाेराले अाेलीलार्इ दिए यस्ताे ठाडो चुनौती, ओली समस्यामा !
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा विप्लव नेतृत्व समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । प्रवक्ता प्रकाण्डलाई ४८ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चलेआदेश दिएको हो ।
चन्दा उठाएको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै छोरा नरेन्द्रहादुर सिंह विकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
आइतबार दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको हो । सर्वोच्चले बाटोको म्यादबाहेक ४८ घन्टाभित्र बन्दीसहित लिखित जवाफ दिन भनेको छ ।
चन्दा एेन २०३० अनुसार अनुसन्धान गर्न आइतबार मात्र उनलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले थप ३ दिन थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । प्रकाण्ड हाल परिसर काठमाडौँको प्रहरी हिरासतमा छन् ।
बन्दका क्रममा ठाउँ ठाउँमा बम, यस्तो छ बन्दको अवस्था :
एमाले र काँग्रेसबाट एउटै वडामा ३ जनाको चुनावी प्रतिस्पर्धा :
गाईको संरक्षण माग गर्दै आएका हिन्दूवादी माथि गोली प्रहार
७१९ स्थानीय तह, ४ महानगर र १२ उपमहानगर बन्ने
चुनावको मुखैमा एमालेमा केपी ओलीविरुद्ध झलनाथ र माधवको मोर्चाबन्दी, पार्टी नै फुट्ने चेतावनी
देउवालाई ७ चोटी प्रधानमन्त्री बन्छन् भनेर भनेकै छैन ! ज्योतिषी ले गरे खुलाशा (भिडियो)